View Sheen- Zoom Block Camera ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ - Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Long Range Zoom Camera Module ကို ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Zoom Block Camera အတွေ့အကြုံ 10+ နှစ်ကျော်ရှိသည်။
Hangzhou View Sheen Technology Co., Ltd. သည် ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။zoom ပိတ်ဆို့ကင်မရာပံ့ပိုးပေးသူ။ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ပေးသွင်းသူဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။ultra long range zoom ကင်မရာ module.
View Sheen Technology ကို 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2018 ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ အဓိက R&D ဝန်ထမ်းများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လူသိများသော လုပ်ငန်းများမှ ဆင်းသက်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ပျမ်းမျှအတွေ့အကြုံမှာ 10 နှစ်ကျော်ဖြစ်သည်။
View Sheen Technology သည် အသံနှင့် ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မော်တာထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကနည်းပညာများကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ထုတ်ကုန်လိုင်းသည် 3x မှ 90x၊ Full HD မှ Ultra HD၊ ပုံမှန်အကွာအဝေးချုံ့ချဲ့ခြင်းမှ အလွန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးချုံ့ချဲ့ခြင်း နှင့် UAV၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊ ရှာဖွေမှု၊ ရှာဖွေမှုတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေသည့် ကွန်ရက်အပူ modules များအထိ ထုတ်ကုန်လိုင်းသည် ထုတ်ကုန်စီးရီးအားလုံးကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့် ကုန်းကြောင်းသွားလာရေး နှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ။ထုတ်ကုန်များနှင့် နည်းပညာအများအပြားသည် နိုင်ငံတော်မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်များကို ရရှိထားပြီး CE၊ FCC နှင့် RoHS ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသည်။
View Sheen Technology ထုတ်ကုန်များသည် နိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်နှင့် ဖောက်သည် 100 ကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားသော ဒေါင်လိုက်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ပါတနာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်မှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကုမ္ပဏီသည် မတူညီသောစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များစွာအတွင်း View Sheen သည် ဒေါင်လိုက်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးရှိ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် ၎င်း၏အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံကို နက်ရှိုင်းစေခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ အားသာချက် ၄ ချက်ရှိပါတယ်။
1. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့- အဓိက R&D အဖွဲ့၀င်များသည် ပျမ်းမျှ 10 နှစ် R&D အတွေ့အကြုံဖြင့် နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းများမှ လာပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် AF အယ်လဂိုရီသမ်၊ ဗီဒီယိုရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်မှု၊ ကွန်ရက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ဗီဒီယိုကုဒ်သွင်းမှု၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစသည်ဖြင့် လေးနက်သောစုဆောင်းမှုများရှိသည်။
2. Focus- သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ zoom ကင်မရာများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် 10 နှစ်ကျော်ကြာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
3.Comprehensive- ထုတ်ကုန်လိုင်းသည် 3x မှ 90x၊ 1080P မှ 4K၊ ပုံမှန်အကွာအဝေး zoom မှ 1200mm အထိ အကွာအဝေး zoom အထိ ထုတ်ကုန်စီးရီးအားလုံးကို အကျုံးဝင်ပါသည်။
4. အရည်အသွေးအာမခံချက်- စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။
Network Zoom Camera Module အပူချိန်ကင်မရာ 30x Zoom Camera Mdule Max Optical Zoom ကင်မရာ Long Zoom Camera zoom ကင်မရာ module